#Madaxweyne Farmaajo iyo dhiggiisa Jabuuti oo is-afgarad ku gaarey Jabuuti
By Caalamka On Aug 19, 2019
Madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti, Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxaa ay kulan ku yeesheen caasimadda dalka Jabuuti halkaas oo uu booqasho shalay ku tagay Madaxweynaha Soomaaliya.
Labada Madaxweyne ayaa ku heshiiyay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Jabuuti, iskaashiga dhinacyada badan ee labada dal iyo qodobo kale.
Waxaa kale oo ay ka wadahadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee Gobolka Geeska Afrika gaar ahaanna qorshaha isdhexgalka dhaqaale ee Gobolka.
Dhinaca kale Jabuuti waxaa ay tartan kula jirtaa Kenya oo uu ka dhaxeeyo kursi ka mid ah 15ka dal ee golaha amaanka ee Qaramada Midoobey kaas oo uu Ururka Midowga Afrika go’aan ka garayo 21ka Bishan August.
Kursigan ayaa waxaa sanadkan ku guuleystay Bariga Afrika,waxaana isugu soo haray Kenya iyo Jabuuti, labadooda ayey ahayd in ay isu deystaan oo midkood kan kale u tanaasulo.
Dowladda Kenya ayaa dowladda Jabuuti ka codsatay in ay kursigaas uga tanaasusho laakiin dowladda Jabuuti ayaa dhegaha ka fureysatay,waxaana ay danta kalliftay in cod loo qaado oo uu Midowga Afrika kala saaro.
5tii Bishan August cod horudhac ahaa oo loo qaaday ayaa waxaa ku guuleystay Dowladda Kenya hayeeshee mahayn mid kama dambeys ah waxaana ay dowladda Jabuuti dadaal ugu jirtaa sidii ay go’aanka 21ka Bishan ka soo baxaya Midowga Afrika xaggeeda u ahaan lahaa.